Uche, Ahụ & Mkpụrụ Obi mkpakọrịta nwoke na nwaanyị App / saịtị: 25 Ndụmọdụ Iji Itule | Sugarlove®
Uche, Ahụ na Mkpụrụ Obi mkpakọrịta nwoke na nwaanyị App / saịtị: 25 Ndụmọdụ Iji Itule
Ngwọta zuru oke maka ndị na-akpọ mkpakọrịta nwoke na nwanyị ịntanetị enyi, na-enweghị oge maka ya, ma ọ bụ nwee ikpe mara nke otu ndị na - egosi ihe mkpali.
Ihe omume 25 ga-eme ka echebara echiche gị echiche, ahụ na mkpụrụ obi gị zuru oke
Ahụike, nri na mmega ahụ na-abụkarị ihe mbụ na-agbata n'uche, mgbe ị na-arụ ọrụ maka nguzozi nke Uche, Ahụ na Mkpụrụ Obi. Ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Ngwa / saịtị anyị bụ ikpo okwu zuru oke maka nyocha mkpụrụ obi. Ebumnuche anyị bụ ka ị kwekọọ na onye nwere mmụọ na - ebi ndụ, nke na-abụghị naanị dọtara mmasị n'ọha gị, mana nke mbụ, uche, Ahụ na mkpụrụ obi gị.
Anyị nwere ike ijikọ gị na onye nkuzi mkpakọrịta nwoke na nwanyị na Sugarlove® Guru, bụ ndị ga-eme ka ị nweta mmemme nzọụkwụ 25 nke onwe gị maka nguzozi nke Uche, Ahụ, na Mkpụrụ Obi. Ime ka odi nfe gi ijiko na nkpuru obi gi. Onye gị na ya na-ebi ndụ nwere ike ịbụ nwoke ma ọ bụ nwanyị, gụnyere Sugar Daddy, Sugar Mama ma ọ bụ shuga shuga.
Ndụmọdụ Dị Mfe maka itule aru gi, uche na nkpuru obi
Ibi ezigbo ndu abụrụla ihe ndị mmadụ na-ebute dị mkpa ugbu a karịchaa mgbe ụzọ ndụ anyị anyị na-aghọwanye ajụjụ na adịghị mma. Mgbe ọ bụla anyị na-eche maka imeziwanye ndụ anyị, ihe mbụ na-apụta bụ ahụ ike.
Anyị na-ejikọ ahụike na nri na nri. Nke a pụtara na iji nwee ahụ ike zuru oke, ịkwesịrị ilekọta ahụ gị anya. Nke a ezughi. A na-ejikọta ahụ anyị nke anụ ahụ na uche na oge ọ bụla nrụgide ma ọ bụ na-echegbu onwe anyị, na-emetụta ahụ anyị n'ụzọ na-adịghị mma. Agụụ na-agụ anyị, anyị adịghị ike ma na-arịa ọrịa oge ụfọdụ.
Ahụ anyị na uche anyị chọrọ nha anya mgbe ọ gbasara ahụike niile. Kedụ ka anyị ga - esi mezuo nke a? Ndị a bụ ndụmọdụ 25 iji nyere gị aka na njem gị.
Wepụta Oge Dị Nkata
Anyị dị ugbu a arụ ọrụ na ọnọdụ choro ka anyi noche nelu igwe ebe obu na aru komputa. Nke a nwere ike ibute oke ibu, ọrịa obi, ụjọ, ọrịa shuga n'etiti ọnọdụ ndụ ndị ọzọ na-eyi ndụ egwu. Guzo ma jegharịa site n’oge ruo n’oge mgbe ino n’ụlọ ma ọ bụ n’ọfịs.
Emega kwa ụbọchị
Nrara onwere mmega ahụ kwa ụbọchị abụghị ihe mmadụ nkịtị. Mmega ahụ nwere uru na-akparaghị ókè gụnyere ahụike siri ike, obi siri ike na uche dị mma. Maka ndị na-anaghị enwe ohere, were obere oge 15 na-agba mpụ, na-eje ije ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ụbọchị.
Ntụgharị uche abụghị naanị maka ndị mmụọ. Ọ bara uru nye onye ọ bụla ma nwee ike inye aka n'imeziwanye ebe nchekwa, ịmepụta ihe na-elekwasị anya, ụra ka mma, ahụike uche na imepụta ihe. Atingrara nkeji ole na ole iji tụgharịa uche n'ụtụtụ na mgbede ga-enyere aka mee ka ahụike niile ka mma.
Na-aguta ma na-etinye uche ahu
Readinggụ ihe na ịmụ ihe mgbe niile ga - eme ka ị nwekwuo amamihe ma melite ike ụbụrụ gị. Ọ na-ebelata nrụgide, na-eme ka ụra hie ụra ma na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka mma. Gụọ akwụkwọ na-enye ihe ọmụma, debanye aha maka ọmụmụ na akwụkwọ edemede.
Mee ụfọdụ Yoga
Yoga na-echebe akwara gị, na-eme ka ọbara na-erugharị, mee ka ahụ gị dịkwuo mma ma mee ka ọnọdụ gị ka mma n'etiti ọtụtụ uru ndị ọzọ. Ọ bụ mmega ahụ zuru oke maka ịhazi ahụ gị, uche gị na mkpụrụ obi gị. Dedrara onwe gị ma ọ dịkarịa ala minit 30 iji mee yoga kwa ụbọchị ga-eme ka ahụike gị ka mma.
Wepu Oge n'èzí
Pụpụ na nseta ma were oge ụfọdụ na-eme njem, ịgba ịnyịnya ije n'oké ọhịa ma ọ bụ mee ihe na-ejikọ gị na okike. Nke a bụ nnukwu ụzọ isi mee ka nchekasị kwụsị, weghachite ike ọgụgụ isi ma mee ka ọ dabara adaba.
Rie nri Organic
Otutu nri anyi haziri, anyi na - ebute ma o nweghi nsogbu ahu ike oge adighi anya. Iri nkpuru osisi na akwukwo nri ka nma ka ogwu gi dolata ha ma belata ohere inwe oria oge adighi anya.
Volunteer ma ọ bụ sonye na projectism
Ọrụ afọ ofufo na-ewulite mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-eme ka ahụike ọgụgụ isi. Ime ihe dị mma maka abamuru nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enye anyị ebumnuche ma na-eme ka anyị na-atụ anya echi ya na isoro ndị ọzọ na-eme nke ọma.
Nwee Ọchịchọ Gị
Ọnọdụ akụ na ụba anyị ugbu a chọrọ ka anyị rụọ ọrụ ruo ọtụtụ awa nke na anyị anaghị ewepụta oge iji mee ihe na-enye anyị obi ụtọ. Wepụta oge maka ihe omume gị na nke a ga - enyere aka belata nchekasị ma melite ahụike niile.
Mụta Inwe Ekele
Ọtụtụ oge anyị na-elekwasị anya n'ihe ọjọọ na-eme gburugburu anyị ma chefuo inwe ekele maka ihe ọma na ndị gbara anyị gburugburu. Iche echiche banyere ihe ị nwere ekele maka ya ga - enyere aka belata ụdị ụjọ na nkụchi ọ bụla.
Knownnụ egwu, egwu na ịgba egwu bụ ndị a maara na ha nwere ọtụtụ uru ahụike. Ọ na-ebelata ọkwa nke nrụgide, na-eme ka ọnọdụ gị ka mma ma mee ka ọbara na-erugharị. Mee ka ị habitụ egwu ị na-ege kwa ụbọchị.
Mụọ Obi nesstọ
Amara imere ndị ọzọ amara na-eme ka ị gbanwee ibi ndụ gị na ahụike gị niile. A na-ahapụ homonụ obi na-adị mma, ụjọ na-ebelata ma ị nwee obi ahụ ike. Buru n'obi na-eme obiọma kwa ụbọchị.
A maara enweghị ụra ụra na-akpata ọtụtụ nsogbu ahụike gụnyere nchegbu, ike ọgwụgwụ, na ncheta ihe n'etiti ndị ọzọ. A na-atụ aro ka awa 7 ruo 9 maka ụra nkịtị maka ọrụ ahụ ike.
Soro erzọ Ọrụ Nwere Nzube
Mgbe anyị na-achụ ego, anyị na-ahụ na anyị na-arụ ọrụ na gburugburu oke nrụgide na-egbochi anyị ịchụso nrọ anyị. Careerzọ ọrụ na-atọ ụtọ na nke bara uru ga-eme ka anyị nwekwuo ọ andụ ma melite ahụike niile.
Nyefee na Ngwa Mma Mma
Ọtụtụ ngwaahịa ịchọ mma nwere kemịkal na-emerụ ahụ anyị. Tụgharịa na ngwaahịa niile sitere n'okike, organic, kemịkalị maka ahụike homonụ, ọbara dị ọcha na anụ ahụ ike.
Ekwela Ka Ebere Ihe
Ọtụtụ mgbe, anyị na-echegbu onwe anyị banyere obere ihe ndị karịrị anyị. Tinghapụ ọnọdụ ụfọdụ na ịghara ime mkpesa banyere ha ogologo oge ga-ebelata nrụgide na nchegbu. Nke a dị mkpa maka ọdịmma gị niile.
Wepụ Chemicals Harsh ejiri maka nhicha ụlọ
Ọtụtụ ndị na-ehicha ihe nwere mmiri kemịkal siri ike na-emetụta ahụ mmadụ karịchaa mgbe mmadụ kuru ume. Iji kwado usoro iku ume dị mma ma gbochie ọrịa na-adịghị ala ala, zụta ngwaahịa nwere ihe ndị sitere na Organic.
Nweta ezumike site n'oge ruo n'oge
Anyị na-eji oge buru ibu na-arụ ọrụ, na-aga n'ihu ma gbadata ma dozie nsogbu. Ighalo na izu ike g’enyere gi aka imeghari ikike gi ma bulie oru ure. Ọ na - ebelata ụdị nsogbu na nchekasị ọ bụla.
Emela Ihe Ọ bụla
Nchegbu banyere ihe ndị ọzọ na-eche banyere gị na ime ihe ha chọrọ bụ ihe na-emebi ahụike uche gị. Nwee nguzo na ndu, mara ihe ichoro ikwere na onwe gi ma bie ndu ichoro n’enweghi echiche ndi ozo.
Chọpụta ma wepu ihe ndị na - akpata nrụgide na ndụ gị
Mmekọrịta na-adịghị mma, gburugburu ọrụ na-adịghị mma na nsị bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kacha akpata nchekasị na ndụ anyị. Iwepu ha ga - enyere aka n’inwe ahu, uche na nkpuru obi.
Zere imebi ihe dika asusu
Ijiri oke ike na -aghari onwe gị na-emetụta echiche gị na ndụ, ọ nwere ike bute oke ụjọ. Zere asịrị na ihe omume ọ bụla dị egwu nke nwere ike ịmepụta ike na-adịghị mma.
Njem soro ndị sitere na Ọdịiche Dị Iche
Ndị dị iche iche si n'ọdịbendị dị iche iche kọwaara anyị ụzọ ndị ọzọ anyị nwere ike isi bie ndụ ma kporie ndụ. Peoplegagharị na isoro ndị mmadụ na emekọrịta ihe na-ewuli ọhaneze ike, na - akwalite ike ụbụrụ ma na - eme anyị obi ụtọ.
Jiri ozo Agwọ Agwọ Ahụ
Ọgwụ sitere na ndị na-ere ọgwụ nwere ụfọdụ mmetụta ọjọọ dị na ya. Iri nri, mkpuru ahihia na mmanu site n’enyemaka nke ndi dibia aru ike, bu ezigbo uzo esi edobe ahu, uche na nkpuru obi.
Gbaghara Onwe Gị
Njehie ndị gara aga na egwu nke ime ha ọzọ na-eme ka anyị ghara ịdị na-aga n’ihu n’ihu n’ụzọ dị mma. Nke a nwere ike ibute nchekasị na nsogbu ahụike ọzọ. Nanị ihe ga-eme bụ ịmụta ihe site n’ihe ndị mehiere ma nọgide na-ebi ndụ n’atụghị ụjọ.
Ibi oke na iche, iche ọtụtụ ihe na iche maka nsogbu ndị gara aga na-eme ka anyị ghara ịnụ ụtọ obere oge na ịchị ọchị maka ihe nzuzu na ndụ. Wepụta oge ka gị na ndị ị hụrụ n'anya na-anọkọ, soro ha chịa ọchị ma nke a ga - eme ka ahụike uche gị na ọdịmma gị niile.